Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa ka digtay: Ha dumin Suuqa Safarka Raaxada!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa ka digtay: Ha dumin Suuqa Safarka Raaxada!
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wtn
Mustaqbalka safarka raaxada kadib-COVID ayaa shaaca laga qaaday
Dalxiiska waxa saldhig u ah abuurista xasuus iyo xasuuso ka yimi khibrado gaar ah oo soo jiidasho leh. Haddii safarka heerka koowaad la dhimo heerka adeegga ee safarka dhaqaalaha dhowr sano ka hor laakiin qiimo sare, markaa xirfadlayaasha safarka waa in aysan la yaabin marka ganacsigu ugu dambeyntii joojiyo inuu noqdo.
Ilaa iyo tan iyo markii uu faafay Covid-ku uu baabi'iyay warshadihii dalxiiska, hogaamiyayaasheeda waxay raadinayeen habab ay uga soo kabtaan khasaaraha maaliyadeed.
Qaar ka mid ah warshadaha ayaa kor u qaaday qiimaha, qaar kalena waxay hoos u dhigeen badeecadaha iyo adeegyada, iyagoo inta badan eeda sicir-bararka, guul darrooyinka silsiladda saadka, la'aanta shaqaale xirfad leh, ama Covid-Faafida.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay fahamsan tahay in dhibaatooyinka kor ku xusan ay yihiin dhibaatooyin dhab ah.
Dr. Peter Tarlow, oo madax ka ah Shabakadda Dalxiiska Adduunka, isla markaana ah khabiir ku xeel dheer socdaalka caalamiga ah iyo amniga iyo badbaadada dalxiiska ayaa sharaxaya:
Dhibaatooyinkan, si kastaba ha ahaatee, waxaa iska leh warshadaha mana aha wax faa'iido leh warshadaha doonaya inay ka shaqeeyaan sidii ay uga soo laaban lahaayeen qarka musiibada si ay u shaqaaleeyaan marar badan marmarsiyo dhab ah oo ku saabsan kharashka safarka raaxada laakiin inta badan bixinta wax ka yar waxa laga yaabo in la helo. filo.
The Shabakadda Dalxiiska Adduunka, oo matalaya wadamada dalxiiska iyo ganacsiyada 128 wadan, waxay ku dhiirigelisaa xubnaheeda inay ka shaqeeyaan dib u dhiska dalxiiska si ay macaamiisheeda hore kaliya uga fikirin "maalmihii fiicnaa" ee safarka laakiin waxay rajeynayaan mustaqbalka halkaas oo madadaalo iyo xarrago safarka. u rog mundane wax lagu xasuusto.
Xilliga dib u dhiska socdaalka iyo dalxiisku ma awoodaan inay arkaan hoos u dhac ku yimaada tayada badeecadooda iyo adeegga ay bixiyaan. Hoos-u-dhaca noocan oo kale ah ee tayada badeecadaha iyo adeegyada la bixiyo waxay mustaqbalka fog dhaawaci doontaa warshadaha dalxiiska, mustaqbalka fogna, hoggaamiyeyaasheeda waxay lumin doonaan lacag.
Haddii warshadaha dalxiiska iyo dalxiisku ay tahay inay guuleystaan ​​​​wakhtiyadan adag, waa inay sameeyaan wax ka badan inay isu arkaan dhibane mana u rogi karaan macaamiisheeda lacag bixinta dhibanayaasha adeeg xumo iyo tayada badeecada oo liidata.
Marka safarku uu noqdo mid dhib badan, marka madadaalada socdaalku ay noqoto shaqada safarka markaa tiro ka mid ah xayeysiisyada xiriirka dadweynaha ama suuqgeyntu ma dabooli karaan niyad-jabka dadweynaha. Taa baddalkeeda, sida ballamihii ay u socdaan ee aan la xaqiijin, warshadaha dalxiisku waxay la kulmi doonaan qalalaase kalsoonida.
Dadweynaha socdaalaya maaha kuwo caqli-gal ah iyo kuwo aan xog-ogaal u ahayn oo marka tayada adeegga iyo badeecadaha ay hoos u dhacaan ama la gooyo, dadka safarka ah waxay heli doonaan goobo cusub oo diyaar u ah inay bixiyaan adeegyo iyo alaabooyin tayo sare leh oo qiimo jaban ah.
Sababtaas awgeed, Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay ku boorineysaa warshadaha inay:
Goobaha la seexdo waxay u baahan yihiin inay bixiyaan adeeg u dhigma qiimaha la beddelay. Hudheelka raaxada kuma dhawaaqi karo inuu qolka nadiifin doono saddexdii maalmoodba hal mar. Haddii aad ku dalacayso qiimo qaali ah markaas bixi adeeg raaxo. Haddii aan la dhimin qiimaha!
Soo celi oo samee faa'iidooyin cusub Bixinta wargeys bilaash ah, ama shukulaato habeen-wanaagsan oo gaar ah waxay u beddeshaa joogitaanka dadka lugaynaya meel gaar ah oo xusuus leh.
Waxa run u ah warshadaha hoyga ayaa sidoo kale run u ah warshadaha diyaaradaha. Haddii shirkadaha diyaaradaha, xitaa fasalka koowaad ama ganacsiga, ay noqdaan wax aan ka badnayn basaska- cirka, markaas ugu dambeyntii socotada ayaa heli doona beddelaad kale. Dunida maanta ganacsiga inta badan waxaa lagu qaban karaa si dhab ah iyadoo ay jirto dhib iyo kharash aad u yar.
Duulimaadyadu waxay u baahan yihiin inay baabi'iyaan qaab dhismeedka khidmadda la carte., Waxay u baahan yihiin inay tusaan dadweynaha inay daneeyaan maaha oo keliya markay raadinayaan dammaanad dawladeed laakiin sidoo kale waqtiyada wanaagsan.
Dalxiiska iyo ganacsiyada socdaalku waxay u baahan yihiin inay horumariyaan saacado u fiican isticmaalayaasha socotada. Soo galitaanka huteel 4pm iyo 11:00 waa doqonimo marka hoteelada aan si buuxda loo deganayn. Siyaasadaha noocan oo kale ah ayaa aakhirka ka kharash badan xayaysiisyada qaaliga ah ee sameeya ballanqaadyada kuwaas oo aakhirka u muuqda kuwo marin habaabin ah.
Kor u qaad tayada badeecadaha loo adeego oo ka dhig alaabooyinkan inay muujiyaan qiimaha qiimaha. Haddi huteel ama maqaaxi ay ku dalacdo ujro sare markaas tayada cuntada la siiyay waa inay ka turjuntaa khidmadaas. Makhaayado badan oo huteelo ah ayaa gooyay geesaha laakiin waxay ku dalacayaan qiimayaal qaali ah. Guntii iyo gabagabadii ayaa ah in marka ay dadweynuhu aad ugu baraarugsanaadaan kala fogaanshaha u dhexeeya qiimaha iyo iibka tayada iyo sumcadda ayaa laga yaabaa inay bilaabaan inay hoos u dhacaan.
Ha ballan qaadin waxa aadan keeni karin. Qaybtii dambe ee qarnigi hore ayaa dalxiiska iyo dalxiiska waxay u dagaalameen inay dib u helaan kalsoonida. Dabadeed 9-11 waxay dadwaynaha ka dhigeen mid la dhacsan baahida warshadaha. Dhammaadkii tobankii sano ee ugu horreeyay qarnigii kow iyo labaatanaad, dalxiiska iyo dalxiiska ayaa lunsaday naxariistaas. Safarka iyo dalxiisku waxay dib u heleen rabitaan iyo isfaham aad u wanaagsan sanadihii Covid. Hadda waa waqtigii rabitaankaas wanaagsan loo rogi lahaa ficillo oo loo muujin lahaa dadweynaha inta ay le'eg tahay warshadaha dalxiiska iyo dalxiisku u mahadcelinayaan macaamiishooda iyo macaamiishooda iyadoo la abuurayo alaab cusub oo cusub oo qiimo leh oo ka tarjumaysa xaqiiqda.
Habka ugu wanaagsan ee suuqgeyntu waa badeecad wanaagsan iyo adeeg wanaagsan oo lagu soo bandhigo jawi wanaagsan oo badbaado leh & ammaan ah. Haddii socdaalka iyo dalxiisku raacaan qaar ka mid ah talooyinkan aasaasiga ah markaas warshadaha ugu weyn adduunka ayaa noqon doona mid weyn mar kale.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Shabakadda Dalxiiska Adduunka iyo xubinnimada gal www.wtn.travel